Maxkamad ka tirtay magacyadii adoonsiga waraaqaha aqoonsiga nin u dhashay Tunisia 4 Saacadood ka hor | Somalilandhorta
Browse: Home / Maxkamad ka tirtay magacyadii adoonsiga waraaqaha aqoonsiga nin u dhashay Tunisia 4 Saacadood ka hor
Maxkamad ka tirtay magacyadii adoonsiga waraaqaha aqoonsiga nin u dhashay Tunisia 4 Saacadood ka hor
Nin 81 jir ah oo u dhashay dalka Tunisia ayaa ku guulaystay in maxkamadi isaga garta siiso oo waraaqaha dhalashadiisa ee rasmiga ah laga tirtiro magac muujinaya inuu ka isirran yahay dadkii la adoonsan jiray. Waxa ninkaas la yidhaa Xamdaan Catiiq Daali
Erayga Catiiq oo macnihiisu yahay “qofkii la xoreeyey” ayaa weli ka mid ah magacyada caa’iladaha dadka Tunisia qaarkood, in kasta oo Tunisia mamnuucday adoonsiga sannadkii 1846.
Ciraaq: Dad ay adoonsi u haysteen kooxda Dawladda Islaamka oo la sii daayey
Dumar reer Burindi ah oo “xaalad adoonsi” oo kale ah ay Sacuudiga ku haysto
Qareennada Xamdaan ayaa ku dooday in eraygaasi yahay mid lagu takooro dadka madow ee Tunisia oo bulshada dalka ka ah qiyaastii 15% waxaanay sheegeen in ay adagtahay qof magaciisa eraygaasi ku jiraa inuu shaqo helo.
“Erayga Catiiq waxa ku ladhan quudhsi sababta oo ah waxa uu ka dhigan yahay in qofkaasi aanu xor ahayn, arintaasina niyad jab ayey ku tahay qoyska magacooda uu eraygaasi ku jiro.” Ayuu yidhi qareenkiisa oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters.
Sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters, dadka madow ee reer Tunisia ayaa ka isiran dad laga soo guray Afrikada saxaraha ka hoosaysa waayadii uu jiray ganacsigii adoonsigu.
Magacyada kale ee adoonsiga tilmaama
In kasta oo Tunisia mamnuucday adoonsiga sannadkii 1846 oo ay noqotay dalkii ugu horeeyey dunida Muslimka iyo guud ahaan ba dunida inteeda kale ee soo saara qaraar noocaas ah. Ayaa hadana waxa weli jira magacyo muujinaya in qofka sitaa ka isirran yahay dadkii la adoonsa jiray.
Magacyadaas waxaa ka mid ah Mamluuk, Shuushaan, Cibeed iyo qaar kale oo badan oo weli marag u ah taariikhdii madoobayd ee dalkaas ee adoonsiga.
“Wanaag yar oo lala raagay”
Huda Masyuudaat oo ah cilmi baadhe derista arimaha Woqooyiga Afrika ayaa sheegtay in aanay u riyaaqayn xukunkan maxkamadda, waxaanay iyadoo BBC-da la hadlaysa tidhi “waxa wax laga yaqyaqsoodo ah in dadka reer Tunisa sannadkan 2020 ay ka hadlayaan arimihii adoonsiga. Waxaanay go’aankaas ku tilmaantay wanaag yar oo lala soo raagay.”
“Weli ma dhawa goorta la cidhib tiri doonto takoorka, waxa laga yaabaa in afartan sano ama dheeraad ka dib la gaadhi doono goorta ay dadka reer Tunisia si dhab ah u wada sinaan doonaan” ayay tidhi Huda Masyuudaat,